Maitiro Ekugadzirisa Bhizinesi Rako, Saiti, uye App yeApple Kutsvaga | Martech Zone
Nhau dzeApple dzichimisikidza yayo injini dzekutsvaga inhau dzinonakidza mumaonero angu. Ini ndaigara ndichivimba kuti Microsoft inogona kukwikwidza neGoogle… uye ndainetseka kuti Bing haina kuzombowana mukana wakakwikwidza. Neye yavo Hardware uye yakadzamidzirwa browser, iwe ungafunga kuti vanogona kutora yakawanda musika mugove. Handina chokwadi chekuti nei vasina asi Google yakanyatso kutonga pamusika ne92.27% share share… Uye Bing ine 2.83% chete.
Ndanga ndiri Apple fanboy kwemakore gumi, nekuda kweshamwari yakanaka iri kunditengera imwe yekutanga AppleTV's. Kana iyo software femu yandakashandira yaida kugamuchirwa kweApple, ini (uye shamwari yangu Bill) uko vanhu vaviri vekutanga mukambani kushandisa Mac malaptop. Handina kumbocheuka kumashure. Vanhu vazhinji vandinoziva vanoshoropodza Apple vanozotarisa pane chimwe chigadzirwa uye vanopotsa iyo hombe mufananidzo ... iyo Apple ecosystem. Paunenge uchishandisa zvigadzirwa zvakasiyana zveApple mumba kana kubasa, ruzivo rwusina musono, kusangana, uye kushandiswa kwazviri hakuna kuenzaniswa. Uye hachisi chinhu icho Google neMicrosoft vanogona kukwikwidzana nazvo.
Iko kugona kweApple kuwedzera iko kwechokwadi kweangu mitsva yekutsvaga zvichibva pane yangu iTunes, AppleTV, iPhone, Apple Pay, Mobile App, Safari, Apple Watch, MacBook Pro, uye Siri mashandisiro - ese ayo akabatana kuburikidza neayo imwechete Apple account - ichave isingaenzaniswi. Nepo Google ichitarisa kunze kunongedza zvinongedzo… Apple inogona kusunga data rakafanana, asi wozobatanidza mhedzisiro nemaitiro evatengi vavo kutyaira kwakanangana nekutarisisa.
Apple Yekutsvaga Injini Yatove Live
Izvo zvakakosha kutaura kuti Apple yekutsvaga injini haisisiri runyerekupe. Iine matsva ekuvandudzwa kweApple's operating system, Apple Tarisa inopa kutsvaga kweinternet kunoratidza mawebhusaiti zvakananga - pasina kushandisa chero yekunze injini yekutsvaga.
Apple yakanyatsosimbisa kuti yaikambaira mawebhusaiti kumashure muna 2015. Kunyange pasina browser-based search engine, Apple yaifanirwa kutanga kuvaka chikuva chekusimudzira Siri - mubatsiri wayo chaiye. Siri chikamu cheIOS, iPadOS, watchOS, macOS, uye maTV anoshanda masisitimu achishandisa izwi rezwi, gadziriso-yakavakirwa kudzora, kutarisa-kuteedzera, uye echisikirwo-mutauro mushandisi mushandisi kupindura mibvunzo, kupa mazano, uye kuita zviito.
Simba raSiri nderekuti rinoenderana nevashandisi vemitauro yemumwe nemumwe, tsvagiridzo, uye zvavanofarira, nekuenderera mberi nekushandisa. Mhedzisiro yega yakadzoserwa yakasarudzika.
Unogona kushandisa yako Robots.txt faira kutsanangura madire aungaita Applebot kunongedza yako saiti:
Kutsvaga kweApple Ranking Elements
Pane mazano eichi chakatoburitswa neApple. Apple yatora yekutsvaga injini zviyero uye yakaburitsa iyi isina kujeka kutarisisa kweayo masisitimu ezvinhu pane yayo rutsigiro peji reiyo applebot chinokambaira:
Yakaunganidzwa kubatanidzwa kwemushandisi nemhedzisiro yekutsvaga
Kukosheswa uye kuenderana kwemazwi ekutsvaga kuwebhu peji misoro uye zvemukati
Nhamba uye mhando yehukama kubva kune mamwe mapeji pawebhu
mushandisi nzvimbo-based masaini (inenge data)
Webhusaiti dhizaini dhizaini
Mushandisi kubatanidzwa uye kuitisa munharaunda kunopa tani yemikana yeApple. Uye kuzvipira kwaApple kune zvakavanzika zvevashandisi kuchave nechokwadi cheyero yekubatana iyo isingaite kuti vashandisi vayo vagadzikane
Webhu kuApp Optimization
Pamwe mukana mukurusa uchave nemakambani anopa zvese nharembozha kunyorera uye kuve newebhu kuvapo. Zvishandiso zveApple zvekubatanidza webhu kune iOS zvinoshandiswa zvakanaka. Pane nzira shoma makambani ane maapplication eApple anogona kutora mukana weizvi:
Universal zvinongedzo. Shandisa zvinongedzo zvepasirese kutsiva echinyakare URL zvirongwa neyakajairwa HTTP kana HTTPS zvinongedzo. Universal zvinongedzo zvinoshanda kune vese vashandisi: Kana vashandisi vaine yako app yakaiswa, iyo link inovatora yakananga kune yako app; kana vasina programu yako yakaiswa, chinongedzo chinovhura webhusaiti yako muSafari. Kuti udzidze mashandisiro ezvese zvinongedzo, ona Tsigira Universal Links.
Smart App Mabhanhire. Vashandisi pavanoshanyira webhusaiti yako muSafari, iyo Smart App Banner inovarega vachivhura yako app (kana yakaiswa) kana kuwana mukana wekurodha pasi app yako (kana isina kuiswa). Kuti udzidze zvakawanda nezve Smart App Banners, ona Kukurudzira maapplication nemaSmart App Banners.
Handoff. Handoff inoita kuti vashandisi vapfuurire chiitiko kubva kune chimwe chinhu kuenda kune chimwe. Semuenzaniso, pavanotsvaga webhusaiti paMac yavo, vanogona kusvetuka vakananga kune yako yekuzvarwa app pane yavo iPad. MuIOS 9 uye gare gare, Handoff inosanganisira chaiyo tsigiro yekutsvaga app. Kuti udzidze zvakawanda nezve kutsigira Handoff, ona Handoff Chirongwa Chekutungamira.
Schema.org Makapfuma Akawanda
Apple yatora yekutsvaga injini zviyero senge marobhoti.txt mafaera uye index yekumaka. Zvinotonyanya kukosha, Apple yakagamuchirawo iyo Schema.org akapfuma snippets akajairwa ekuwedzera metadata kune yako saiti, kusanganisira AggregateRating, Offers, PriceRange, InteractionCount, Sangano, Recipe, SearchAction, uye ImageObject.
Dzese injini dzekutsvaga tsvaga, kukambaira, uye rongedza zvemukati nenzira imwecheteyo, saka kushandisa zvakanakisa maitiro ekushandisa yako yemukati manejimendi system kana ecommerce chikuva kwakakosha. Pamusoro pezvo, kunyangwe, kugadzirisa yako saiti uye nharembozha kusanganiswa kunofanirwa kuwedzera zvakanyanya kugona kwako kuwanikwa neApple yekutsvaga injini.
Bhalisa Bhizinesi Rako NaApple Mepu Unganidzo
Iwe unayo nzvimbo yekutengesa kana hofisi uko vatengi vematunhu vanoda kukuwana iwe? Kana iwe uchidaro, ita chokwadi chekunyoresa Apple Mepu Unganidza uchishandisa yako Apple kupinda. Izvi hazviise chete bhizinesi rako muApple Mepu uye ita madhairekitori nyore, zvakare inosangana naSiri. Uye, hongu, iwe unogona kusanganisira kuti iwe kana kwete unobvuma Apple Pay.
Maitiro Ekutarisa Yako Saiti neApple
Apple inopa chishandiso chiri nyore kuziva kana yako saiti inogona kuverengerwa uye ine ekutanga mateki ekuwanikwa. Yangu saiti, yakadzosa zita, rondedzero, mufananidzo, bata icon, rinoburitsa nguva, uye robots.txt faira. Nekuti ini handina nharembozha, yakadzoka zvakare kuti ndakanga ndisina chero app yakabatana:
Simbisa Saiti Yako NaApple
Ndiri kutarisira Apple ichipa yekutsvaga koni kune mabhizinesi ekuteedzera nekukwenenzvera kuvepo kwavo mumhedzisiro yekutsvaga kweApple. Kana ivo vakagona kupa mamwe maSiri Izwi ekuita metric, zvingave zviri nani.
Ini handisi kubata tariro sezvo Apple inoremekedza zvakavanzika kupfuura Google… asi chero chishandiso chekubatsira mabhizinesi nekuvandudza kwavo kuoneka chaizokosheswa!
Tags: apuroapple botmamapu eapuroApple Mepu kubatanidzaapple payapple searchapple search engineapple watchmaapuloapple tviosiPhoneItunesMobile Anwendungsafariizwi kutsvaga
Excel Fomula yekugadzirisa Zvemagariro Ekuvandudza neZuva reVhiki